Adult – Channel Myanmar
IMDB: 4.3/10 716 votes
[18+] The Girls Rebel Force of Competitive Swimmers (2007)
[18+] Moebius (2013) ဒီကိုရီးယားဇာတ်ကားက ထူးဆန်းပါတယ်။ ဘာစကားမှ မပြောပါဘူး။18+ သီးသန့် ဇာတ်ကားလဲ မဟုတ်တာ အသေအချာပါ။ဇာတ်လမ်းကတော့ ကြက်သီးထစရာဖြစ်ပြီးဇာတ်လမ်းလို့ပြောရမလား အတွေးတစ်စလို့ပြောရမလား တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကိုဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေရတာလို့ ပြောရမလားအတော်ပဲ ဇဝေဇဝါဖြစ်ရတဲ့ဇာတ်ကားပါ။ဒါရိုက်တာ Kim Ki-duk က ရိုက်ကူးထားပြီး သူ့အကြောင်းနဲ့ သူ့အနုပညာကိုတော့ သူရိုက်ခဲ့တဲ့ 3‑Iron (2004), Spring Summer(2003), Bad Guy(2001), The Isle(2000) စတဲ့ဇာတ်ကားတွေမယ် အထင်အရှားမြင်ရပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးဆရာတွေရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့မှတ်ချက်တွေရရှိထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ ပြသစဉ်တုန်းကတော့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်မှုကိုရရှိခဲ့ပြီး ဘာလိုကြောင့်များလဲဆိုတာ သိချင်ရင် ကြည့်ကြပါဦး။IMDB Rating(6.4)Rotten Tomatoes(78%) File Size…(700MB)Quality…BluRay 720p Format…mp4 Duration…01:28:00 Subtitle…Myanmar Subtitle(Hardsub) Encoder…Nyeinsaeya Aung
IMDB: 6.3/10 4,994 votes
[18+] Moebius (2013)
[18+] Mr. & Mrs. Player (2013) အတည္တက် အခ်စ္တစ္ခုကိုဘယ္ေတာ့မွ မေဆာက္တည္ဘဲ နာမည္ယူ အသည္းခြဲလုပ္ေနတဲ့ ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီခိုင္မင္းသားကာဆန္ဟာ တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္မေလးခ်ီလင္းကို ျမင္ျမင္ခ်င္းပဲ ေၾကြက်ေျမခသြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ အေနအထိုင္အမူအက်င့္ေတြမတူညီၾကတဲ့အခါမွာ အခ်စ္က မစရေသးဘူး..အဆုံးသတ္ရမလိုေတြျဖစ္လာတဲ့အခါ...။ခ်ီလင္းဟာ ကာဆန္ကိုသူနဲ႔အတူလာေနဖို႔ေခၚပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဒီအတိုင္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး...ရက္တစ္ရာတိတိ ဘယ္မိန္းမနဲ႔မွ ဘာညာ ဘာညာေတြ မလုပ္ပါဘူးဆိုတဲ့ ကတိနဲ႔ပါ။ဒီကတိကို ကာဆန္တစ္ေယာက္တည္ႏိုင္မလား သူတို႔ရဲ႕ အခ်စ္လမ္းခရီးဟာဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆိုတာကိုေတာ့....။ဇာတ္ကားထဲက မင္းသမီးေတြက ေပါက္စီေတြခ်ည္းလွိမ့္ပိတ္ေရာင္းေနလို႔ မိသားစုနဲ႔ေတာ့မၾကည့္သင့္တဲ့ဇာတ္ကားပါ ညီကိုတို႔။(ရုပ္ရွင္အညႊန္းကို Han Htoo Zaw မွတင္ဆက္ပါသည္။) File Size…(800MB) and (310MB) Quality…BluRay 720p Format…mp4 Duration…01:39:00 Subtitle…Myanmar Subtitle(Hardsub) Encoder…Nyeinsaeya Aung Translated by Missy Win
[18+] Mr. & Mrs. Player (2013)
[18+] Mother’s Friend (2015) ကဲေနာက္ထပ္လူၾကီးကားတစ္ကားေလးပါ။ ဒီတခါေတာ့ကိုးရီးယားဖက္လွည့္တာေပါ့။ ဇာတ္လမ္းကေတာ့ေကာင္းတယ္ဗ်ဳိ႕။ အထက္တန္းေနာက္ဆံုးနွစ္ေက်ာင္းသားေလးခၽြဲစူဟာသူေမွ်ာ္မွန္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ကိုရေတာ့မယ္ဆိုျပီး အားကုတ္ၾကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မွာမေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အိမ္တြင္းေရးျပႆနာေၾကာင့္အိိမ္ပါဆံုးရႈံးသြားျပီး မိခင္ျဖစ္သူကသူ႕ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူထံေခတၱအပ္ႏွံခဲ့ရပါတယ္။ လူပ်ဳိေပါက္ကအရြယ္ေက်ာင္းသားျဖစ္သူနဲ႕အပ်ဳိၾကီးမမတို႕ပဲေနတဲ့အိမ္ေလးဟာေတာ့အခ်ိန္ေတြၾကာလာတာနဲ႕ အမွ်လူပ်ဳိေပါက္ေလးအတြက္ခက္ခဲလာတာပါပဲ။ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့သူ႕အေမသူငယ္ခ်င္းအပ်ဳိၾကီးေၾကာင့္ပါပဲ။ အဲေတာ့ဘာေတြဘယ္လိုေၾကာင့္ဇာတ္လမ္းေတြျဖစ္ခဲ့လဲ။ အပ်ဳိၾကီးမမကေရာဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးလဲ ။ေနာက္ဆံုးအဆံုးသတ္မွာဘယ္လိုျပီးဆံုးသြားမလဲဆိုတာေတာ့၁၈ေယာက္စုျပီးၾကည့္လိုက္ၾကပါဦး။ ဇာတ္ကားကလည္းေကာင္းသလိုမင္းသမီးကလည္းလန္းပါတယ္။ ကိုရီးယားကားေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလိုပဲဟာသေလးေတြဘာေလးေတြ အေရာအေႏွာတင္ဆက္ထားတဲ့အတြက္ၾကည့္လို႕ေကာင္းပါတယ္။ 18+အခန္းေတြေဖာေဖာသီသီပါတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မိသားစုနဲ႕မၾကည့္သင့္ပါဘူး။ 18+ဆိုေတာ့18+အတြက္ေပါ့ေနာ့္(ေျပာလည္းရတာမွမဟုတ္တာ:3)။ခြီရင္းၾကည့္လိုက္ၾကပါဦး။ (ဘာသာျပန္သူကေတာ့ အဘဖရိုင္းေဒးပါ) File Size : (650 MB) and (240 MB) Quality : HDRip 720p Running Time : 1hr 20minutes Format : Mp4 Genre : Drama, Comedy,Adult Translated By A Ba Friday's Encode By Berry Htike
[18+] Mother’s Friend (2015)
[18+] Dismay (2016) ဒီကားလေးကတော့၂၀၁၆ခုနှစ်ထွက်ဖိလစ်ပိုင်ဒရမ်မာလူကြီးကားလေးတကားပါ။ လူကြီးဆိုမှကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်၁၈စုကြည့်ပါ။ ဇာတ်ကားလေးကတော့ဖိလစ်ပိုင်ကျေးလက်ဒေသကလယ်သမားမိသားစုတခုမှအခြေပြုထားပါတယ်။ လယ်သမားကြီးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကဆေးရုံမှာကင်ဆာရောဂါနဲ့နှစ်ရှည်လများစွာကြာအောင်ခံစားနေခဲ့ရတာပါ။ နောက်ဆုံးဆရာဝန်တွေလက်လျော့လိုက်ပြီးမိသားစုတွေအိမ်ကိုပြန်ခေါ်လာကြပါတယ်။ သားနှစ်ယောက်ရှိပြီး အစ်ကိုဖြစ်သူကတော့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အလုပ်မှာကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေပြီးညီဖြစ်သူကတော့ကျောင်းသားအူတူတူဆိုက်နဲ့ပါ။ အကြံကြီးတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကသူ့ဇနီးအတွက်ဆိုပြီးသူနာပြုခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာဇာတ်လမ်းစသယောင်ယောင်ပဲငိငိ။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲဇနီးဖြစ်သူဆုံးပါးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူကသူနာပြုမလေးကိုပေါ်တင်အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ပါတော့တယ်။ အဲဒီမှာပဲအိမ်တွင်းပြသနာလေးတွေစတော့တာပါပဲ။ သူနာပြုလေးကလည်းလန်းတာကိုး။ ဆိုတော့ယောကျာ်းသားသုံးယောက်နဲ့အိမ်မှာဘယ်လိုဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်လာမလဲ။ အဆုံးသတ်မှာရောမျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်လာမလား။ မြုပ်ကွက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ၁၈+တွေပါတယ်ဆိုတော့အသက်မပြည့်သူများမကြည့်သင့်ပါ။ မင်းသမီးကလည်းမင်းသမီးပါပဲ။ (တကယ်တော့မိန်းမတွေမကောင်းတာဘာာ:3) (ဘာသာပြန်သူကတော့ အဘဖရိုင်းဒေးပါ) File Size : (700 MB) Quality : Webrip 720p Running Time : 1hr 30minutes Format : Mp4 Genre : Drama, Adult Translated By A Ba Friday's Encode By Berry Htike
IMDB: 5.2/10 137 votes
[18+] Dismay (2016)
[18+] Wrestling (2014) ကိုရီးယား Comedy ဇာတ္ကားျဖစ္ေပမယ့္ Nudity ေတြ အမ်ားၾကီးပါတာေၾကာင့္ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားသာ ၾကည့္သင့္ပါတယ္။Sex is zero ဇာတ္ကားထဲက မင္းသား Choi Seong-guk ကအဓိကဇာတ္ေဆာင္အျဖစ္ ပါဝင္ထားျပီး မင္းသမီးႏွစ္လက္ကေတာ့ ကိုရီးယား Erotic ဇာတ္ကားေတြမွာ ပါေနၾကျဖစ္တဲ့ Song Eun-Chae နဲ႔ Ha Na-Kyung တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ဇာတ္လမ္းကေတာ့....မင္းသားက ထန္ဂိုဏ္းက ။ အဲဗားထန္ေနတာ...။ေက်ာင္းဆရာျဖစ္ေပမယ့္ ဇာတ္ရႈပ္ေတြလဲ လုပ္ေသးတယ္။ထန္ခ်က္ကလဲ တပည့္မေလးေတာင္ အလြတ္မေပးခ်င္သူပါ....သူတို႔ရဲ႕ထန္ေက်ာင္းကို Sexy က်က် ေက်ာင္းဆရာမအသစ္တစ္ေယာက္ ထပ္ေရာက္လာတဲ့အခါ ထန္ဂိုဏ္းဝင္ ေက်ာင္းဆရာလူပ်ိဳၾကီးေတြ ဘယ္လို ခ်ဥ္းကပ္ၾကမယ္..ဘယ္လိုေတြေသာင္းက်န္းၾကမယ္ဆိုတာ...။ File Size...(800MB) and (270MB) Quality...HD-Rip 720p Format...mp4 Duration...01:25:00 Subtitle...Myanmar Subtitle(Hardsub) Encoder...Nyeinsaeya Aung Translated by Saw Wunna
[18+] Wrestling (2014)
[21+] All Ladies Do It (1992) ထုံးစံ အတိုင်း ဘာသာပြန်ကောင်းတဲ့ အဘဆရာ သာရစ် ကတော့ အိမ်ထောင်ရေး ရုပ်ရှင်တစ်ကားကို ၃ ကြိမ်မြောက် ထပ်မံ ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါပြီ ... :P ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ Rated R အဆင့် မို့ မိသားစု နှင့် အတူမကြည့်ရန် ၊ အသက်မပြည့်သေးသူများ မကြည့်ရန် သတိပြုမှုပါ... အိမ်ထောင်ရေး ပညာပေး ဇတ်လမ်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး မိန်းမဖြစ်သူမှာ ယောကျာၤးဖြစ်သူထံမှ စိတ်ကျေနပ်မှု မရ၍ အပြင်တွင် တစိမ်းယောင်္ကျား တစ်ဦးဖြင့် ခြေလိမ်ရှုပ်သော ဇတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်.... Guru Alcon ============ ထံုးစံ အတုိင္း ဘာသာျပန္ေကာင္းတဲ့ အဘဆရာ သာရစ္ ကေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရး ရုပ္ရွင္တစ္ကားကို ၃ ၾကိမ္ေျမာက္ ထပ္မံ ဘာသာျပန္ေပးလုိက္ပါၿပီ ... :P ဒီရုပ္ရွင္ကားဟာ Rated R အဆင့္ မို႔ မိသားစု ႏွင့္ အတူမၾကည့္ရန္ ၊ အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ား မၾကည့္ရန္ သတိျပဳမႈပါ... အိမ္ေထာင္ေရး ပညာေပး ...
IMDB: 5.3/10 3,492 votes
[21+] All Ladies Do It (1992)
[18+] Sexy Soccer (2004) INFO: Title: Sexy Soccer (2004) Also known as: Sing gum zhook kao Year : 2004 Genres : Comedy | Sport | Erotic Language : Cantonese Country : ChinaDirected by : Sik Hok Min Stars : Tong Tong, Au Yeung, Carmen YeungPlot: Down on his luck soccer coach Rolando is havingahard time scoring; in more ways than one! In debt toaloan shark; he really needs ...
IMDB: 3.5/10 43 votes
[18+] Sexy Soccer (2004)
[21+] Gun Woman (2014) 2014 ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့ပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဂျပန် အပေါင်းနှစ်ဆယ့်တစ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကားလေးက ကျတော်ကျိဖူးသမျှ Japan Gore movies တွေထဲမှာ တော်တော်ကြမ်းတဲ့ ဇာတ်ကားပါ ပြီးတော့ ဇာတ်ကားရဲ့ story line နဲ့ plot twist တွေက 21+ လို့တောင် မထင်ခြင်စရာပါပဲ နောက်တခုက သွေးသံရဲရဲ ခန်းတွေ ဆင်းရဲသားအခန်းတွေ ပေါပေါသောသော ပါတာမို့ ပုရိသအကြိုက်ကားတစ်ကားဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ ရဲရဲြက်ီးအာမခံရဲပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ဆရာဝန် တယောက် တစုံတခုသောအကြောင်းတစ်ခုကြောင့် ကလဲ့စားခြေဖို့အာသီသပြင်းထန်နေတဲ့ဆရာဝန် အဲ့ဒီ့ ဆရာဝန်က ဘာကြောင့် အသဲအသန် ကလဲ့စားခြေဖို့ ဆာလောင်နေလဲ တနေ့ ကံတရားက မျက်နှာသာပေးလာတော့ မိန်းမပျိုလေးတယောက်ကို ဝယ်ပြီး ရက်စက်တဲ့ လူသတ်သမ ဖြစ်အောင် သေချာလေ့ကျင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကဲ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးက ဆက်လက်ကြည့်ပါ (ဘာသာပြန်ကတော့ ကိုကွန်ပိုက်ပါ :)
IMDB: 4.7/10 3,020 votes
[21+] Gun Woman (2014)
[18+] Sex Doll (2016) 2016 ခုႏွစ္ထြက္ သည္းထပ္ရင္ဖိုဇာတ္ကားေလးတစ္ကားျဖစ္တဲ့ sex doll ကားမွာ႐ုပါဒ့္ဆိုတဲ့သူက အဂၤလန္အေျခစိုက္ျပင္သစ္ညဥ့္ငွက္ေလးျဖစ္တဲ့ဗာဂ်ီနီဆိုတဲ့ေကာင္မေလးကိုဘယ္လိုေတြကယ္မွာလဲဆိုတာစိတ္ဝင္စားစရာပါပဲ။၁၈+ အခန္းတခ်ိဳ႕ပါတာကိုေတာ့ သတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ File Size...(900MB) and (310MB) Quality...BluRay Rip 720p Format...mp4 Duration...01:42:00 Subtitle...Myanmar Subtitle(Hardsub) Encoder...Nyeinsaeya Aung Translated by Saw Wunna
IMDB: 4.5/10 305 votes
[18+] Sex Doll (2016)
The Voyeur (1994) Atacollege in Rome,aprofessor, nicknamed "Dodo" is inadeep depression. His stunningly beautiful wife has just left him for another man. Dodo wants her back very badly and has erotic daydreams about her. A beautiful young student in his class asks him foraride home and seduces the lucky man, but still he wonders about ...
IMDB: 5.7/10 2,183 votes
Perfume: The Story ofaMurderer (2006) စမွေးဖွားလာကတည်းက ငါးစိမ်းတန်း ညစ်ပတ်စုတ်ပြတ် အနံ့ဆိုးရွားတဲ့ငါးစျေးတန်းမှာ အမှိုက်ပုံထဲ မွေးဖွားလာတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမယ့် သူ့မှာ ပါလာတဲ့ ပါရမီကတော့ အင်မတန် အနံ့ခံစွမ်းအားကောင်းတာရယ်အနံ့တွေကို ခွဲခြားနိုင်ခြင်း ရှိမှုပါပဲ...သူ့မှာ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းသိပ်မရှိပါဘူး လိုချင်တာကိုပဲ သိတဲ စိတ်ပဲရှိပါတယ်သူ့ကို သနားလို့ အလုပ်ခေါ်ခိုင်းတဲ့ မွှေးနံ့သာများ ဖော်စပ်တဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ဆီရောက်ရှိပြီး နောက် ကိုယ်ပိုင်ရေမွှေးတစ်ခု ထွင်ချင်လာပါတယ်...ဒါပေမယ့် သူထွင်ချင်တာကတော့ အပျိုစစ်စစ်များ ရဲ့ ကိုယ်သင်းမွှေးရနံဖြစ်ပြီးထိုမွှေးရနံတွေ ရဖို့ မိန်းကလေးတွေကို ပေါင်းတင်အဆီထုတ်ပြီး ဖော်စပ်ရတာပါဒီလိုနဲ့ မြို့တော်မှာ အပျိုလေးတွေ ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ အသတ်ခံရတာ များများလာလို့လိုက်လံ ဖမ်းစီးပြီး ရေမွှေးဖော်စပ်တဲ့ ကောင်လေးကို ဖမ်းမိသွားတဲ့ အခါမှာတော့....(18+ ဖြစ်လို့ မိသားစုနှင့်အတူမကြည့်သင့်ပါ)(ဘာသာပြန်သူကတော့ Nyi Thanlwin ပဲဖြစ်ပါတယ်)File size…(1.2 GB) Quality…Blu-Ray Rip 720p Format…mp4 Duration….02:27:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Translator.....Nyi Thanlwin Encoder….Thanhtike Zaw
[18+]Swimming Class (2009) WARNING: 18+ Contains: Adult Themes | Nudity & Sex SceneGenre: Drama, Erotic Also Known As: Country: Japan Language: Japanese Year: 2009 Cast: Konno RinoPlot: University student Nohara hasaboy friend Akito. Akito travels aboard with his friends leaving Nohara who doesn’t know how to swim. To surprise his boy friend, Nohara decides to attend swimming classes. Eventually, she hasasecret affair with the guy in ...
[18+]Swimming Class (2009)
[18+] The Parasite Doctor Suzune: Evolution (2011) A beautiful woman, Dr. Suzune Arizono, isavet who specializes in parasites and who fights daily to endaparasitic plague on the human population. She learns thatasinister organization controls the plague that causes sexual arousal in its victims, using the parasites for the organization's own dark purpose. Suzune wakes up inafactory-like enclosed space. She ...
IMDB: 3.7/10 97 votes
[18+] The Parasite Doctor Suzune: Evolution (2011)